साङ्लोले बाँधेर राखिन्छन् बालबालिका, सिंगो गाँउमा अधिकांश मनोरोगी– पशुपतिमा व्यापक चोरी ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
साङ्लोले बाँधेर राखिन्छन् बालबालिका, सिंगो गाँउमा अधिकांश मनोरोगी– पशुपतिमा व्यापक चोरी ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३९६ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
निम्न विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गरिएको छः
१. पाल्पा रिब्दिकोटको एउटा गाँउ– जहाँ दाम्लो र साङ्लोले बाँधिएका छन् बालबालिका
पाल्पा । उनी पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–१ ख्याहा जोगिथुमका १० वर्षीय बालक शिव कुमाल । आमाबुबाको काखमा खेल्ने, साथीभाईसँग रमाउँदै विद्यालय जाने उमेरमा यसरी सांग्लोमा बाँधिएका छन् कुमाल । उनको बोली फुर्दैन, उनलाई छोड्यो भने टाउको भित्तामा ठोक्ने, बेसुरमा भाग्ने गर्छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कजोर भएपछि बाबु विदेशिएका छन् । आमा भने मेलापात गर्छिन् ।
२. पशुपतिमा चोरीको घटना बढ्यो– घटना लुकाउदै प्रहरी, सीसी क्यामेराबारे कसैलाई थाहा छैन् !
काठमाडौं । धार्मिक, ऐतिहासिक अनि पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण नेपालको सम्पत्ति मध्येको पशुपतिनाथ मन्दिर पनि एक हो । पशुपतिनाथको मन्दिर सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा पर्दछ । यहाँ भारतबाट पनि ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटकहरु आउने गर्दछन् । तर पछिल्लो समयमा यहाँ चोरीको घटनाहरु ह्वात्तै बढेको छ । पशुपति दर्शन गर्न आएका तिर्थालुहरु कसैको सिक्री, कसैको पर्स त कसैको मोबाइल चोरी हुने गरेको छ । दिनमा यस्ता ४–५ वटा घटना भएपनि प्रहरीमाझ भने थोरैले मात्र उजुरी गर्दछन् ।
३. त्रिविको लापरवाही– मोरङमा विएसी पढ्ने विद्यार्थीको नजिता अन्योलमा
विराटनगर । महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा विज्ञान संकाय विएसी दोस्रो वर्ष अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आफ्नो परीक्षाफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लापरवाही गरेको गुनासो गरेका छन् । लाइभ कार्यक्रममा गुनासो गर्दै एक जाना विद्यार्थीले अधिकांश विद्यार्थीको म्याथ विषयमा सिंगल नम्बर मात्रै आएकाले रि–टोटलिङ गर्न आवेदन दिएको ५ महिनासम्म पनि नतिजा नआएको गुनासो गरेका थिए ।